होमपेज / शुक्रबार / स्वर्ग खोज्दै नर्क पुग्नेहरू
स्वर्ग खोज्दै नर्क पुग्नेहरू	16 May 2013 बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
गोपाल दाहाल	Be the first to comment! 12345 (2 votes)
धरान- धरानकी मञ्जिला लिम्बू रमाइलो गर्न भनेपछि ज्यानै फाल्न तयार हुन्थिन्। बाबु हङकङ लाहुरे भएकाले उनलाई पैसाको समस्या थिएन। उनको संगत आफूभन्दा जेठा दाइदिदीसँग थियो। उनीहरूले बुङ्बुङ्ती चुरोटको धुवाँ उडाएको देखेपछि मञ्जिलालाई पनि चुरोट खान मन लाग्यो। एक्स्पेरिमेन्ट गरौँ भनेर उनले चुरोट पिउन थालिन्। बिस्तारै गोटी र सिरिञ्ज हान्न पुगिन्। पढाइ त उतिबेलै बिग्रिएको थियो। यतिबेला चाहिँ उनलाई जीवनै बिग्रियो भन्ने लागेको छ। भन्छिन्, 'त्यतिबेला स्वर्ग यही हो जस्तो लाग्थ्यो। रमाइलो गर्दागर्दै एचआइभी पोजिटिभ भइसकिएछ। अहिले जीवन नर्कमा भासिए जस्तो लाग्छ।' लिजाको ब्वाईफ्रेन्ड ह्यान्डसम थियो। उनीहरू दैनिक भेट्थे। उसैसँग जीवन बिताउने सपना थियो लिजाको । एकदिन उनले ब्वाइफ्रेन्ड कुलतमा फसेको थाहा पाइन्। उसलाई कुलतबाट छुटाउन निकै सम्झाइबुझाइ गरिन्। धेरै चोटि उसको गोजी छामेर गोटी फाल्ने र लुकाइदिने गरिन्। उसलाई ड्रग्स छाड्न कर गरिन्। तर, ड्रग्स खाएपछि 'हेभेन फिल हुन्छ' भन्दै पाखुरामा सुई हानेर ऊ मस्त हुन्थ्यो। ब्वाईफ्रेन्डको व्यवहारले उनलाई टेन्सन हुन थाल्यो। 'हेभन फिल हुन्छ' भन्थ्यो कस्तो हुँदो रहेछ? भनेर उनले पनि एकदिन टेस्ट गरिन्। त्यसपछि, दुवै जना मिलिजुली झ्याप हुन थाले। अहिले दुई वर्ष भयो, उनीहरू दुवै एउटै खाल्डोमा परेका छन्। बिहे गरेर जीवन बिताउने सपना भताभुंग भइसकेको छ। 'जति कोसिस गरे पनि अब त सुई नहानी बस्नै सक्दिनँ,' उनले भनिन्। नेपाली समाजमा अचेल यस्ता कथा र पात्र प्रशस्त भेटिन्छन्। कोही ब्वाईफ्रेन्डले धोका दिएको पिर मेटाउन नशाको लतमा चुर्लुम्म डुबेका छन् त कसैलाई साथीभाइको संगतले कुलतमा जाकेको छ। धेरैले फेशनका रूपमा कुलत अँगालेका छन्। पूर्वका धरान, इटहरी, दमक, उर्लाबारी, पथरीलगायत स्थानमा कुलतमा फस्ने युवतीको संख्या बढ्दो छ। एक तथ्यांकअनुसार पूर्वमा अहिले पाँच सयदेखि सात सयसम्म महिला लागुऔषध प्रयोगकर्ता छन्। त्यसमध्ये धरानमा सबैभन्दा बढी दुई सय ९८ जना भेटिएका छन्। तर, धेरै महिला लागुऔषध प्रयोगकर्ता तथ्यांकमा नअटाएका हुने जानकारहरूको भनाइ छ। लागुऔषध प्रयोगकर्ता र एचआइभी संक्रमित महिलाको हकहितका लागि काम गरिरहेको संस्था दृष्टि नेपालकी कार्यक्रम निर्देशक वन्दना थापा भन्छिन्, 'छोरा कुलतमा फसे अभिभावकले सुधारका लागि अरूसँग सल्लाह लिने र सुधारगृह पठाउँछन्। तर, छोरी कुलतमा लागेको थाहा पाए विवाह हुँदैन भनेर सकेसम्म लुकाउने गर्छन्।' युवतीहरूलाई 'सेक्सी देखिन्छ', 'डन्डीफोर जान्छ' वा 'स्लिम बनिन्छ ' भनेर ड्रग्स प्रयोग गर्न उक्साउनेहरू प्रशस्तै हुन्छन्। कतिपयले युवतीसँग मोज गर्न र ड्रग्स भिडाउन पनि यस्तो हावादारी गफ दिएका हुन्छन्। युवतीहरू भने तिनको कुरामा विश्वास गरेर कुलतमा फस्छन्। टिनएजका केटीहरू उमेरजन्य स्वाभावका कारण रमाइलो गर्न, नाच्न, हाँस्न, उफ्रिन चाहन्छन्। उनीहरू छिट्टै साथीभाइको सर्कलमा भिज्छन्। नशाको लतमा फस्ने कारणमध्ये यी प्रवृत्ति पनि दोषी हुन्छन्। 'किरात याक्थुङ चुम्लुङ पुनर्जीवन केन्द्र'का निर्देशक कमल तिगेलाको भनाइ छ, 'अभिभावकको ध्यान कम हुनु र खराब संगत हुनु नै युवतीहरू कुलतमा फस्नुको मुख्य कारण हो।'कुलतमा फसेका युवतीलाई समाज र परिवारमा पुनःस्थापना हुन गाह्रो हुन्छ। कुलत छाडे पनि महिलालाई परिवार र समाजले अपनाइहाल्न चाहँदैन। फलतः उनीहरू पुनः दुर्व्यसनमै फर्किने सम्भावना हुन्छ। परिवारमा भइरहने झैझगडा, आमाबाबुबीचको बेमेलजस्ता कारणले सन्तान दुर्व्यसनमा चाँडो फस्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुलतमा फस्नुलाई एक प्रकारको मानसिक रोग भनेको छ। मानसिक विचलनका कारण मान्छेमा कुलत सुरु हुन्छ। मनमा अत्यधिक निराशा छाउँदा पनि युवतीहरू नशामा डुब्छन् भने बढी खुशी हुँदा पनि एक्साइटेड भएर कुलतमा लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। मानसिक रोग भएकाले यो जतिबेला पनि बल्भि्कन सक्छ। अर्थात्, नशाको कुलतमा फसेर सुधि्रएको मान्छे पुनः कुलतमा फर्किन सक्छ। Tweet Leaveacomment Message *
ड्राइभरले सबैको कचकच सुन्नुपर्छ : रूपक श्रेष्ठ, बा.३ख ४३९३कुन रुट हो ?
उमेर कति भयो ?
दोहोरी र दाम्पत्यः दुइटै शानदारदेवी घर्ती र राजु ढकालको जोडी २०६३ सालतिरै हिट थियो। ठूलो भनिएको 'टुबोर्ग दोहोरी' प्रतियोगिता यो जोडीले नेतृत्व गरेको समूहले जितेको थियो। गायन जोडीका रूपमा स्टेजमा जमेका उनीहरू केही वर्षपछि...	भित्र भद्र बाहिर छाडामान्छे स्वभावैले बन्धन नरुचाउने प्राणी हो। खानदानी, हुनेखाने वा सम्पन्न परिवारका सन्तानले घरभित्र कडा अनुशासन र निगरानीमा रहनुपर्छ। तर, जब उनीहरू घरको पर्खाल नाघ्छन्, उन्मुक्त भइहाल्छन्। अनि, सीमा नाघेर रंग–रमाइलोमा...	अबोला नम्रताअभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठका अनेक रूप पर्दामा देखिइसकेका छन्। नेपाली फिल्ममा अहिलेसम्म कुनै मूल पात्र नदेखिएको भूमिकामा नम्रता देखिने भएकी छिन्। उनले मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेको फिल्म 'मौन'मा उनले पूरै मौनता...	भारतसँग जिब्रो नचपाई कुरा गर्नुपर्छप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन व्यापक छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूलगायत विभिन्न दलका नेतासँग भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषयका बारेमा परामर्श गरेको खबर सार्वजनिक भएका छन्। ९० साल भुलाउने ७२ सालमहाविपत्तिको कुरा चल्नासाथ ९० सालको महाभूकम्पको प्रसंग उठिहाल्थ्यो। विपद्को नेपाली इतिहास भुलाउने गरी शनिवार महाभैँचालो गयो। हजारौँको ज्यान गएको छ, हजारौँ घाइते भएका छन्, लाखौँ घरबारविहीन भएका छन्। देशका महŒवपूर्ण...	'ल्याङफ्याङे जीवन व्यवस्थित भयो'आर्यन सिग्देल ‘चकलेटी हिरो’को रूपमा चिनिन्छन् । व्यस्त हिरोमध्ये पर्ने उनी अहिले फिल्म निर्माणमा पनि सक्रिय हुन थालेका छन् । अघिल्लोपल्ट निर्माता सुवास गिरीसँग मिलेर बनाएको ‘नोभेम्बर रेन’ हिट भएपछि...	एक घुम्ती, एक पात्र : तीन महिनामै स्टार!आयुषा राई चार वर्षदेखि नेपाली कला क्षेत्रमा छिन्। धेरै र्यामम्प नापेकी उनी विज्ञापन र म्युजिक भिडियोमा पनि उत्तिकै देखिन्छिन्। पछिल्लो समय रंगमञ्च र फिल्ममा पनि देखिन थालेकी छिन्। केही समयअघि...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...